Kinoki ခြေထောက်ကပ်ခွာ ဂျပန်ရိုးရာဆေးနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သဘာဝသစ်ဖု သစ်ဥများဖြင့်ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် ဆိုးကျိုးမရှိစေပဲတစ်နေကုန်ပေါ့ပါးလန်းဆန်းခြင်း၊ အကြောပြေခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေခြင်း ၊ အသားအရည်ကို စိုပြေစေခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်... ညအိပ်ခါနီးမိမိခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ရေသေချာစင်အောင်ဆေး၍ အ၀တ်သန့်သန့်ဖြင့်သုတ်ပါ.. ပြီးနောက်ဆေးထုတ်လေးကို စာမပါသည့်ဘက်ကိုမိမိခြေထောက်ဘက်ထား၍ စာပါသည့်ဘက်ကိုဘူးတွင်ပါဝင်သော ပလာစတာဖြင့် သေချာစွာကပ်ထားလိုက်ပါ ညအိပ်လျှင်လည်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ပြီးမနက်အိပ်ယာထလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အပူအပုပ်များနှင့် အဆိပ်များလျော့နည်းသွားပါလိမ့်မည်.. ကပ်ခွာကိုခွာ၍ခြေထောက်ကို ရေစင်အောင် ဆေးလိုက်ပါ တစ်နေကုန်ပေါ့ပါးလန်းဆန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ - အသုံးပြုသင့်သူများ - အကြောတပ်သူများ ၊ အပူများသူများ ၊ ခန္ဓာကိုယ်အညောင်းထိုင်သူများ ၊ ကားမောင်းရသူများ ၊ ညဘက်အိပ်မပျော်သူများ အတွက် တစ်ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ကောင်းမွန်စေပါတယ်.. ဈေးနှုန်း - ၉ထောင် ကျပ် (၁၀ ခု ပါသည်) Delivery free in Yangon တခြားကျန်းမာရေး ပစ္စည်းများ ကြည့်ရန် http://www.rocketonlineshopping.com/category/health ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male Operator) 09784419691 (Female Operator) 09961127000 (Office) ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမဆက်ချင်သူများအတွက် Order form https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
ဂျပန်မှ ထုတ်လုပ်ထားသော ဂျပန်နားကလော်စက်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။ နားကလော်စက် အသုံးပြုရန် Battery လေးလည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နားကလော်ချောင်း နှစ်ခု ပါဝင်ပါမယ်။ လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ https://www.facebook.com/RocketOnlineShopping/videos/878551268949859/ ဝယ်ချင်ပါက ဖုန်းလေးသာ ဆက်ပေးပါ။ 09264686461 ဈေးနှုန်း - 15000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Sloan Letter Near Vision Card with 40 cm Cord Printed on two sides. 17.8 cm x 22.9 cm
HOTA Near Vision Card
HOTV Near Vision Card with 40 cm cord. Includes flash cards and instructions. 20.3 cm x 25.4 cm
How to take Proper Measurement for best accuracy in blood pressure measurement: - Sit comfortably atatable. Rest your wrist on the table . - Relax for about 5-to 10 minutes before measurement. - Raise your hands the wrist cuff is at the same level as your heart. - Remain still and keep quiet during measurement; - Do not measure right after physical exercise or bath. - Measure your blood pressure at about the same time everyday. By aviation restrictions,batteries are not included in the package. Jumper brand ဖြစ်သော လက်ကောက်ဝတ်သွေးဖိအားတိုင်းကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည့် digital Wrist Cuff Blood Pressure Monitor ကို models အမျိုးမျိုး ရနိုင်သည့်အပြင် လက်မောင်း ၊ခြေမျက်စိ အစရှိသည်တို့ကို တို့ကိုတိုင်းတာနိုင်သော Arm Blood Monitor,Wrist Cuff Blood Pressure Monitor အပြင် အခြား အရည်အသွေးပြည့်ဝသောာ Medical supply products များစွာကို ကျွန်တော်များ U Than Ohn &amp; Sons Co.,Ltd တွင် ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။
Continuous text is printed on the reverse side with line sizes 20/80 to 20/16. 9.5 cm x 16 cm
Distance Vision Chart, Sloan Letter Linear-Spaced Distance Chart
9 line chart with2groups for repetitive testing 9&quot; x 14&quot; (23 x 35.5 cm) For vision testing at 10ft (3 meters) Compare to: &quot;Snellen&quot; Charts All 23 x 35.5 cm charts can be wall-mounted and fit the small illuminator cabinet (product no: 93090).
Distance Vision Chart, Sloan Letter Proportional-Spaced Distance Chart
Letter Chart, 13 line chart with2small groups for repetitive testing
For single use,mainly use for liquid-leading and urine collection after operation.Easy to read scale for quick determination of unine volume. Non-return valve to present the back flow of urine. Hanging hole designed on it, convenient to fix on bedside and does not affect the normal rest.The Urine Bag is made from PVC, PE, PP, and ABS in medical grade. It consists of bag, connecting tube, taper connector, bottom outlet and handle. It is intended to use with an indwelling catheter in persons who are incontinent of urine, can not urinate in the normal way, or need to have the bladder flow continually.Three types: screw valve, pushing valve, cross valve. ဆီးမထိန်းနိုင်သော လူကြီးများအတွက်အထူးသင့်လျော်ပြီး ဆီးစဉ်ဆက်မပြတ်သွားတတ်သော သက်ကြီးရွယ်အို အဘိုးအဘွားများအတွက် အထူးအသုံးပြုရန်သင့်လျော်ပါသည်။Sizes အမျိုးမျိုးရှိပြီး အဆင်ပြေနှစ်သက်ရာ Urine Bags များကို လက်လီ၊လက်ကား ရွေးချယ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာသော Medical supply products များကို ကျွန်တော်များ U Than Ohn &amp; Sons Co.,Ltd တွင် စုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။